अप्रील 4, 2019 अप्रील 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments श्रीमती, श्रीमान
श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् भनिन्छ । जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्दछ । बिहे भइसकेका श्रीमान श्रीमतीले आफ्नो वैवाहिक जीवन सन्तुलित राख्नको लागि संधै सचेत हुनुपर्छ । श्रीमान श्रीमती बीच कहिलेकाहीँ झगडा त भइहाल्छ तर त्यही झगडाको कुरा अरु तेस्रो व्यक्तिलाई सुनाउँदा त्यसले समस्या सुल्झने भन्दा पनि बिग्रने खतरा बढी हुन्छ । त्यसैले विवाहित श्रीमान श्रीमतीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धका बारेमा तेस्रो व्यक्ति वा आफ्नो अति नै नजिक साथीसँग पनि त्यस्ता केही कुराहरु सेयर गर्नुहुँदैन जसले तपाइँको वैवाहिक जीवन नै पूर्णरुपमा बिगारिदिन सक्छ ।
आफ्नो सम्बन्धका बारेमा खुल्ला रुपमा साथीहरुसँग कुरा गर्नु र व्यक्तिगत कुरालाई सामाजिक सञ्जालहरुमा स्टाटस हाल्नु वैवाहिक जीवनमा नोक्शानी पु-याउन सक्छ । श्रीमान श्रीमती बीच कतिपय कुराहरु नितान्त व्यक्तिगत हुने गर्छ जुन कुरा तपाइँले जानीकन वा नजानीकन साथीहरुसँग सेयर गरिरहेको हुनसक्छ । त्यसले तपाइँको सम्बन्धमा टकराव पर्ने वा अन्य तेस्रो व्यक्तिले अनावश्यक लाभ उठाउने अवसर पनि मिल्दछ । तपाइँको व्यक्तिगत जीवनको कुरा सार्वजनिक स्थलमा छलफल हुनु वा सामाजिक सञ्जालमा मजाकको विषय बन्नु तपाइँ आफैलाई घाटा हो । त्यसैले यस्ता कुरामा बडो चनाखो हुनुपर्दछ ।
१. बेडरुमको कुरा
तपाइँको जति मिल्ने साथी भएपनि बेडरुमको कुरा कहिल्यै अरु साथीहरुसँग सेयर नगर्नुहोस् । यो तपाइँको व्यक्तिगत कुरा हो । तपाइँको बेडरुमको कुरा अन्य व्यक्तिले चासो रुपमा त सुन्लान् तर तपाइँकै पछाडी उसले जोकको रुपमा अन्य साथीहरुलाई पनि सुनाउन सक्छन् । त्यसरी तपाइँको बेडरुम भित्रको कुरा एक दुई हुँदै धेरै मान्छेको कानमा पर्न सक्छ । यदि यस्तो कुरा तपाइँको श्रीमान वा श्रीमतीले थाहा पाउनुभयो भने उनको मनमा नराम्रो असर पर्नसक्छ र तपाइँको बेडरुमको कुरा अरुको लागि खिल्ली उडाउने माध्यम बन्छ ।
२. श्रीमान श्रीमती बीचको झगडा
श्रीमान श्रीमती बीच कहिलेकाहीँ झगडा हुन सक्छ । भनिन्छ नि श्रीमान श्रीमती बीचको झगडा परालको आगो हो । यो एकछिन बल्छ र चाँडै निभ्छ । तर यही कुरा अरुले थाहा पाउँदा दुई बीचको झगडा झन सल्किन सक्छ । त्यसैले कोही साथीको सहानुभूति पाउने मनशायले वा दुःख सेयर गर्ने ठानेर कहिल्यै पनि आफ्ना साथीहरुसँग घरको झगडाको कुरा सेयर गर्नु हुँदैन । यसले तपाइँको पार्टनर अरुको नजरमा तल खस्छ र उनको चरित्र वा व्यवहारमाथि अनावश्यक औंला उठाउन सक्छन् । लामो समयसम्म पनि त्यही नराम्रो चरित्रका रुपमा अरु साथीमाझ चिनिन पुग्छ ।
श्रीमान वा श्रीमतीले एक अर्काको कमाई वा आर्थिक अवस्थाका बारेमा अन्य साथीहरुसँग सेयर गर्नुहुँदैन । दुःख-सुखको कुरा श्रीमान श्रीमती बीच मात्रै राख्नु पर्छ । मेरो श्रीमानको कमाई राम्रो छैन् वा मेरो श्रीमतीले राम्रो कमाई गर्न सक्दैनन् भनि अरुलाई सुनाउँदा उनीहरुले तपाइँको आर्थिक हैसियत जान्ने मौका पाउँछन् र तपाइँलाई उनले सजिलै नजर अन्दाज गर्न सक्छन् ।
आफ्नो सम्बन्धमा आएको झगडाको कुरा वा कमजोरीका कुरा साथीहरुसँग सेयर गर्नुहुँदैन । यसरी नकारात्मक कुराहरु मात्र साथीहरुसँग सेयर गर्दा साथीभाई माझ तपाइँको छवि राम्रो बन्दैन । तपाइँको सम्बन्ध बिग्रेको ठानेर अरु साथीहरुले तपाइँको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु भन्दा डिभोर्सतर्फ लाग्ने सल्लाह पनि दिन सक्छन् । जुन तपाइँको वैवाहिक जीवनमा घातक सिद्ध हुन सक्छ ।
५. पुरानो सम्बन्धको बारेमा कुरा
श्रीमान वा श्रीमती दुबैले आफ्नो विवाहित साथीको पुरानो सम्बन्धका बारेमा कसैसँग कुरा गर्नुहुँदैन । तपाइँका साथीहरु तपाइँको शुभचिन्तक मात्र हुनसक्छ भन्ने छैन, उनीहरु तपाइँको पूरानो सम्बन्धको बारेमा थाहा पाउँदा इमोशनल ब्ल्याकमेल गर्ने खतरा समेत हुनसक्छ । जुन तपाइँको वैवाहिक सम्बन्धलाई बिगार्छ ।
← रक्तचाप कम भए के गर्ने ?
रिसालु श्रीमतीलाई फकाउने टिप्सहरु →
नोभेम्बर 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक 11
अगस्ट 28, 2019 अगस्ट 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2